बेलाबेलामा बिस्मित हुन्छु, मरौं कि जस्तो पनि लाग्छ : प्रधानमन्त्री ओली – Life Nepali
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ वर्षे अवधीमा भएका उपलब्धिबारे प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेका छन्। शुक्रबार संसदमा सम्बोधन गर्दै केही तर्कहरुले आफू बिस्मात हुने बताएका छन्। ‘पहिले सरकारको चर्चा गर्दा गफ गरेर हुन्छ काम गर्नु पर्‍यो नि गर्छु भनेर हुन्छ भनेको सुन्थे। अहिले परिवेश अलि बदिलिएछ। यो एक वर्षदेखि एउटा थेगो जस्तै बनेको छ। अंक र आँकडाबाट हुन्छ? ग्लोबल इन्डेक्समा होइन जनतामा इम्प्रिेसन के छ? बुझ् भन्ने जस्ता कुराहरु सुनिन्छि। यस्ता तर्क सुन्दा म बेलाबेलामा विस्मित हुन्छु। मरौं कि जस्तो पनि लाग्छ।
तर ठिकै छ अंकमा होइन अनुभुति नै सही इन्डेक्स होइन इम्प्रेसनकै कुरा गरौं न त। के छ इम्प्रेसन, परिणाम के छ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘यो सरकार गठन हुनुअघि तराई र हिमाली जिल्लाहरुमा शीतलहरका कारण जनताले ज्यान गुमाइरहेका थिए। तर दुई वर्ष यता कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन्। नेपाल गरिब छ तर भोकमरीको अन्त्य भयो। अब कोही भोकै मर्नु पर्दैन्।’
Previous प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई बर्खास्त गर्न सांसद् माग
Next पार्टी खोल्ने, झण्डा बोक्ने र सडक तथा सदनमा प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रतालाई मात्र लोकतन्त्र ठान्दिनँः प्रधानमन्त्री